cokonormer's Reading List - cokonormer - Wattpad
cokonormer's Reading List
#shounenai #adventure #fantasy #action #translation
The Legendary Master's Wife[Myanmar Translation]
192K 43.8K 122
[A translation from English to Myanmar] starting from (Chapter-400~ ~Available in both Unicode and Zawgyi~ story cover-crd to original artist English translators- Exiled Rebels Scanlations This is my first time translatinganovel. Hope you enjoy it!
NO VILLAIN? No Problem![Mm Translation](Zawgyi+Uni)
12.1K 727 2
ချန်းရီဟိုက် ကသာမန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေတစ်ယောက်နဲ့ မလိုက်အောင် အကြွေး လေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေရှာတယ် သူက villain ဇာတ်ကောင်တွေကိုပဲသဘောကျနေရာကနေ ဝတ္ထုထဲရောက်သွားပြီး ဘယ်လိုပေါက်ကရတွေနဲ့ ဇာတ်လိုက်လိုက်နဲ့ ဘယ်လိုကတိကအောက်လေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ.......အဟမ်း...သိချင်ရင်ဝင်ဖတ်ပြီး vote and followed ပေးခဲ့နော် Svss နဲ့နဲနဲ ဆင်ပါတယ် ဆ...
Systemက ကျွန်တော့်ကို Novelထဲ ထည့်သွားတယ်ဗျို့(own Creation)
317K 55.9K 58
Title: Systemက ကြှနျတေျာ့ကို Novelထဲ ထညျ့သှားတယျဗြို့ Zawgyi and Unicode Started date: 16.6.2020 End date: ????? ကျွန်တော့်ဘဝက အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတာ ခင်ဗျားလေးလို့ သိမယ်မထင်ဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော့် မိန်းမမပြောနဲ့ မူးလို့ရှူစရာစော်တောင် မရှိသေးဘူးလေ၊ဒါကို "စမြင်ကတ်စရာ System "တခုက မင်းမှာ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် ရေးခဲ့...
The Villain Saving System (QT:VSS)《Myanmar Translation》
127K 15.1K 31
Author - littlemist ***Burmese Translation of - Quick Transmigration Villain Saving System I don't own this story. Everything of this story is owned by original creator. Full Credit to relevant owner.
349K 38.9K 79
အချိန်ခရီးသွားခြင်းက တကယ်ပဲ ရှိတာလား.... ပတ်ဝန်းကျင်က လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် လူများက သူမကို "ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်" ဟု ပြောနေသလိုလို... မျက်ဝန်းတို့ကို မှိတ်လိုက်သည်... "မဖြစ်နိုင်တာ..." (BL မဟုတ်ပါ :\_ ) (My OC)
81.7K 5.8K 65
ခဈြသူနဲ့ သူငယျခငျြးဖဈသူရဲ့ သစ်စာဖောကျမူ့ကိုခံရတဲ့ သူမ မထငျမှတျပဲ ရုတျတရကျသဆေုံးသှားပီး..... ကြျောကွားတဲ့ မှူးမတျတဈယောကျရဲ့ သမီးတျောအနနေဲ့ ပွနျလညျနိုးထလာခဲ့တယျ.ကံကွမ်မာစခေိုငျးမူ့အရ မိဖုရားအလောငျးအလြာဖဈလာခဲ့ပမေယျ့ အိမျရှစေံ့နဲ့ သူ့ခဈြသူကွား Villainလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့သူမ... သူခဈြရတဲ့ မိသားစုကို ကာကှယျဖို့ ကွိုးစ...
CEO ရဲ့ဗီလိန်ငယ်သူငယ်ချင်း [ဘာသာပြန်]
94.6K 14.5K 27
Description ချောင်မိုယွီ နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမဟာ ဝတ္ထု ကမ္ဘာထဲရောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ပြီးတော့ ဒီဝတ္ထုရဲ့အမျိုးသားဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီCEOရဲ့ မနှစ်မြို့ခြင်းကိုခံရတဲ့ ဗီလိန်ကောင်မလေးရဲ့ကိုယ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်။ CEOရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ချောင်မိုယွီဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကိုပွေ့ထားပြီး CEOရဲ့ရုံခန်းဆီကိုလာပေမ...
Every World seems not quite right (Credit)(mm translation)
7.7K 967 9
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Shao Qian ဟာ သူ့ကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့တဲ့ system ကို ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာ သူရဲ့မူလကမ္ဘာကိုလည်းပြန်မသွားချင်သေးတော့ သူကိုနစ်နာစေခဲ့တဲ့အဲ့ကမ္ဘာတွေကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒာပေမဲ့...ဘာလို့ ကမ္ဘာတိုင်းကမ္ဘာတိုင်းက ပုံမှန်မဟုတ်ရတာလဲ။ သူဖြတ်သန်းဖို့အတွက်သုံးတဲ့နည်းလမ်းကပဲမှားနေလို့လား? အဓိကဇာတ်ဆောင်က...
FOX SPIRIT AS BEST ACTOR (MM Translation)
82.9K 9K 73
လူတွေမေ့နေတဲ့သရုပ်ဆောင်တယောက်အဖြစ် ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ မြေခွေးဖြူလေး.... ORIGINAL AUTHOR - Mindzop Status - Ongoing
ကမ္ဘာပတ်ကြမယ်(All about countries)
11.7K 1.1K 9
ဒီစာအုပ်လေးက နိုင်ငံတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကိုယ့်တစ်ခါမှမသွားဖူးပေမဲ့ အဲ့နိုင်ငံကိုရောက်သွားသလိုခံစားရစေပါမယ်။(hee ...ညွှန်းတာနဲနဲများသွားလားမသိ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ✔ရိုးရာဓလေ့ ✔နာမည်ကြီးတဲ့အရာတွေ ✔လူဦးရေ၊ရာသီဥတု၊ရုံးသုးံစကား၊ မြို့တော် အစသဖြင့်ပြောပြသွားပါမယ်။ cannaဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေ ပြန်ပြောပြတာပါ။...
8.1K 580 3
[Zawgyi / Unicode] ဖန်​မန်​သခင်​လေးတစ်​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့ ကျော့ယွင်​ချီဟာ ဖခင်​ကို ကယ်​တင်​ဖို့အတွက်​ ဝိညာန်​ကူးပြောင်းလာသူ ဟန်​ဆောင်​ပြီး နန်းတော်​ထဲ ခိုးဝင်​တယ်​။ အဲ့ဒီမှာ ဝိညာန်​ကူးပြောင်းသူ အတည်​ပြုစုံစမ်းရေး တာဝန်​ခံ Pro ကြီး လောကျူနဲ့တွေ့ပြီး လောကျူက သူ ဟန်​ဆောင်​ထားတာကို ရိပ်​မိ သိရှိသွားတဲ့ အခါမှာတော့... _____...
ကိုကိုက ကြွက်...ကျွန်တော်က ကြောင်
728K 71.1K 41
ဒီတစ်ခါ ဖန်တီးချင်တာလေးကတော့ တွေ့တာနဲ့ သူချေကိုယ်ချေ သူကိုက်ကိုယ်ကိုက် အမြဲ fight နေတဲ့ Uke ကိုကိုနဲ့ seme ညီညီ လေးကိုအသက်သွင်းချင်ပါတယ်ဗျ အားပေးပါဦးနော်.... ❤ ဒါဒါလေးတွေကို အမြဲချစ်ခင်လေးစားလျက်... Jasmine ..... Unicode ဒီတဈခါ ဖနျတီးခငျြတာလေးကတော့ တှတေ့ာနဲ့ သူခကြေိုယျခြေ သူကိုကျကိုယျကိုကျ အမွဲ fight နတေဲ့ Uke...
စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက် ပြန်လည်မွေးဖွားသန့်စင်ခြင်း [Rebirth ofasupermodel]
74.9K 10.5K 21
🌼Myanmar Translation🌼 စူပါမျောဒယျတဈယောကျ ပွနျလညျမှေးဖှားသနျ့စငျခွငျး Rebirth ofaSupermodel Trọng Sinh Siêu Mẫu • 重生超模 Author: Mo Chen Huan, 莫晨欢 Pairing: Xi Ze × Ming Yu
Everyone Thinks That I like him(Myanmar Translation)
73K 16.4K 54
Original Author-飞奔的小蜗牛 (ပွေးနသေောခရုငယျလေး) Original Publisher-jjwxc Eng translator-Mosstree Eng tran link is here https://www.novelupdates.com/series/everyone-thinks-that-i-like-him/ I'm notaprofessional so if what original author means changes alittle, it's only my fault and forgive me. Credits to the owner De...
760K 91K 58
伪装学渣 / Wei Zhuang Xue Zha (ကြောငျးသားဆိုး အယောငျဆောငျ)
64.3K 10.2K 37
Ghosts Know What I Experienced <Myanmar Translation>
9.3K 712 8
ရှီကျာသည်﻿ ငယ်﻿စဉ်﻿ကတည်းက ယင်﻿စွမ်းအင်﻿များ အား﻿ကောင်းလွန်း﻿သူတစ်﻿ဦးဖြစ်﻿ကာ ﻿နေ့စဉ်﻿﻿နေ့တိုင်း သရဲတ﻿စ္ဆေများအားကြုံရ၊ဆုံရ၊မြင်﻿ရသည်﻿။ တစ်﻿﻿နေ့မှာ﻿တော့ ရှီကျာရဲ့ကာကွယ်﻿﻿ရေးအ﻿ဆောင်﻿﻿ကျောက်﻿သည်﻿ မ﻿တော်﻿တဆကျိုးပျက်﻿သွားခဲ့သည်﻿။ အာကာသအခရာ တ﻿စ္ဆေဖမ်းသူယဲ့ကျင်းရှီသည်﻿ ရှီကျာအားကူညီ﻿ပေးဖို့﻿အ﻿﻿﻿ကြောင်းဖန်﻿လာခဲ့သည်﻿။ ...
ငါ့အခနျးဖျောက Omegaမဟုတျလောကျဘူး/ငါ့အခန်းဖော်က Omegaမဟုတ်လောက်ဘူး
167K 24.1K 22
Myanmar translation of the story 'My Roommate Probably Is Not an Omega' Original Author ▶ Ablfish Eng Translator ▶ IAmABanana Status in COO ▶ 25 mini chapters (completed) #Full_Crd_to_original_author_and_eng_translator Alphaနဲ့ Betaကွားက love storyလေးတဈပုဒျ🖤 ခဈြဖို့လဲကောငျး ရယျလဲရယျရတာမို့ အားလုံးအတူတူဖတျရအောငျ ဝမေ...
241K 10.3K 140
I'm not the author or the translator of this story or own anything about this story For offline reading Synopsis This isastory about Gong Lixin who was the young master of an ancient underground palace in the ancient times. He was raised by his master and forced to partake sexual relationships with numerous people t...
သဈပငျလေးရဲ့ ခဈြဝိညာဉျ (သစ်ပင်လေးရဲ့ ချစ်ဝိညာဉ်)
148K 19.5K 38
(Unicode) 🌳 အပွငျပမျးက အေးစကျစကျနိုငျပမေယျ့ အတှငျးစိတျကတော့ နှေးထှေးတဲ့ "Tang Jun "ရဲ့ ဘ၀ထဲကို ဘယျ‌နရောကနေ ရောကျလာမှနျး မသိရတဲ့ သဈပငျလေးရဲ့ ဝိညာဉျ က ၀ငျရောကျလာခဲ့တယျ... 🌳 ကောငျးကငျကနေ ကလြာခဲ့တဲ့ ဝိညာဉျလေးဟာ "Tong Jun"နဲ့ အတူနဖေို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ!!! 🌳 ဒီအခြိနျက စပွီး Tang Jun ရဲ့ နစေ့ဉျ ဘ၀မှာ ပြျောရှငျစရာ အဖွဈအ...
Sweet, Although Short (MM Translation)
52.4K 11K 28
Description: Short Stories Collection Associated Name: 甜，就是短 Original Author: Long Qi (龙柒) From novel updates. I do not own this story. This is justatranslation. All credit goes to original Author and English Translator. Please enjoy it. Thank you. ~~ ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
The Villain has something to say [Burmese Translation]
134K 23K 33
Native title : 反派有话说 English title : The Villain has something to say Aurthor : Mo Chen Huan (莫晨欢) Eng Translator : Flying lines team Burmese Translator : Eleven Miles Year : 2016 Status in COO : 150 chapters + 14 extras (Completed) All content are credited to the original owner. I'm just translating this in order to...
Stone Age Husband Raising Journal (SAHRJ MM Translation)
72.4K 5.7K 14
Title - ကြောကျခတျေ ခငျပှနျးပြိုးထောငျခွငျး မှတျတမျး/ကျောက်ခေတ် ခင်ပွန်းပျိုးထောင်ခြင်း မှတ်တမ်း (史前养夫记) Author - Jué Jué (决绝) Translation Status - Ongoing (Readable in both Zawgyi & Unicode)
The Generous Poor With Really Stingy (MM Translation)
25.6K 5.1K 14
Completed✔✔ 📌 This is my second work of Translation.Not for money! Not my own story! I just want to share this beautiful story with my local ppl. All the credit goes to original author and publishers. If you're author or publishers and you don't like me for translating this without your permission, you can say it di...
Daily Life of Being the Campus Idol's Fake Boyfriend(MM Translation)
33.7K 5.8K 56
[🔔update- at least 1part/week] Associated Name - Gei xiaoCao dang JiananYou de Rizi 给校草当假男友的日子 Original Author - Xi He Qing Ling 羲和清零 Original Publisher - jjwxc Status - On going Chapter - 65 Chapters +9side Chapters English Translation link https://www.novelupdates.com/series/the-daily-life-of-being-the-campus-ido...
441K 31K 32
‼️ ယဉျယဉျကြေးကြေးပွောရငျ_😁တိရိစ်ဆာနျလေးတှအေရမျးခဈြတဲ့တိရိစ်ဆာနျအထူးကုဆရာဝနျလေးရယျ.... သူ့ရဲ့ခှေးလေးရယျ ကွောငျလေးရယျ အကွောငျးဖတျရမှာပါ😁 🔞ရိုငျးရိုငျးပွောရငျတော့_ Threesomeပေါ့ဗြာ xD အကျပုဒိတျ-၂ရကျခွားတဈခါ
တကယျတော့ ငါ့ရနျသူက ငါ့ကိုတိတျတိတျလေးခဈြနတေယျ [ဘာသာပြန်] ✔️
32.4K 3.5K 5
Original Author - 疾风不知 Original Name - 死敌居然暗恋我 Original Eng Translator - KK Translator Eng Name - My Enemy is actually secrectly in love with me ⚠︎ ᴛʜɪs ɪs ᴛʜᴇ ғᴜɴ ᴛʀᴀsʟᴀᴛɪᴏɴ. ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴏᴡɴ ᴀɴʏ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴛʜɪs sᴛᴏʀʏ. ᴀʟʟ ʀɪɢʜᴛs ʙᴇʟᴏɴɢ ᴛᴏ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴀᴜᴛʜᴏʀ ᴀɴᴅ ᴇɴɢ ᴛʀᴀɴsʟᴀᴛᴏʀ. ғᴜʟʟ ᴄʀᴇᴅɪᴛs ᴛᴏ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴀᴜᴛʜᴏʀ ᴀɴᴅ ᴇɴɢ ᴛʀᴀɴsʟᴀᴛᴏ...
51.1K 6.3K 16
Reborn As The Villain President's Lover Author(s) 林盎司 Status 167 chapters + 47 extras (completed) ⚠️⚠️⚠️Just Translation!!! I don't own anything. Full credit to original author and English Translation team chrysanthemum garden. Xylusram(သိုးထီး)
4.2K 379 3
*THIS NOVEL ISN'T MY OWN* *အပြျောသကျသကျဖွငျ့သာဘာသာပွနျခွငျးဖွဈပွီးဖတျလို့မကောငျးပါကဘာသာပွနျသူကြှနျုပျရဲ့လိုအပျခကျြသာ​ဖွဈပါသညျ။* **Unicode ရော Zawgyi ရော နှဈမြိုးလုံးဖွငျ့တငျထားပါသညျ** *ဖတျပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါသညျ* PS.ကောငျးမကောငျးဝဖေနျနိုငျသညျ
One Night, One Day, One Year, One Lifetime *translation*
9.7K 1K 7
~ ‌ကောင်‌‌ဖေး(Gao Fei), နင့်‌ရဲ့ လက်‌တစ်‌ဖက်‌ကို ဆုပ်‌ကိုင်‌ထားပြီး ဒီဘဝမှာ နင့်‌ရဲ့‌ဘေးနားက‌နေ လိုက်‌ပါဖို့အတွက်‌ ဒီည ၊ ဒီ‌နေ့ ၊ ဒီလ ၊ ဒီနှစ်‌ကာလ ၊ ဒီဘဝသက်‌တမ်းတစ်‌‌လျှောက်‌လုံးကို ငါ ရှင်‌သန်‌‌နေခဲ့တယ်‌ဆိုတာကို ယုံမလား ?~ Title: One Night, One Day, One Year, One Lifetime Translation of: 一夜一日一年一世 Pinyin: yī yè yī r...